ရေစစ်ကလေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရေစစ်ကလေးများ
Posted by thura.ng2 on Sep 23, 2010 in News | 1 comment
ဘီစီ 469-399 တုန်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဂရိပညာရှင်ကြီး ဆိုခရေးတီစ်းဟာ သူ့ရဲ့ ပညာဥာဏ်ထက်မြက်မှု၊ အတွေးအခေါ် ကြီးမားရင့်သန်မှုတွေကြောင့် နိုင်ငံအ၀ှန်းက ချီးကျူးလေးစားခြင်း ခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်.. တစ်ရက်တော့ ပညာရှင်ကြီး ဆိုခရေးတီးစ်နဲ့ အလွန်ကို ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဆီကို အပြေးအလွှား ရောက်လာပြီး ရေးကြီးသုတ်ပြာနဲ့ “ဆိုခရေးတီစ်း…. အသင်ရဲ့ တပည့်တစ်ယောက်အကြောင်း ကျွန်ပ် ကြားခဲ့တာလေး တစ်ခုကို ပြောပြချင်လို့” လို့ ပြောပါတယ်. ဒီတော့ ပညာရှင်ကြီး ဆိုခရေးတီးစ်က “ခနလောက် စောင့်ပါဦး.. အသင် မပြောခင် ကျွန်ပ် အရင်ပြောပါရစေ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပြီး “တကယ်လို့ အသင့်အနေနဲ့ ကြားခဲ့တဲ့ စကားကို ကျွန်ပ်ကို ပြောမယ်ဆိုရင် မပြောခင်မှာ ရေစစ်သုံးခုနဲ့ စစ်ထုတ်တဲ့နည်းကို သုံးပြီး အသင်ရဲ့ သတင်းစကားကို အရင် စစ်ဆေးကြည့်ရအောင် ” လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ပညာရှင်ကြီး ဆိုခရေးတီစ်းရဲ့ ရေစစ်သုံးခုနဲ့ စစ်ထုတ်တဲ့နည်းကို ကျွန်မ တော်တော် သဘောကျသွားပါတယ်.. ကျွန်မတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း အကျိုးမရှိသလို၊ နားထောင်ရသူ အတွက်လည်း အကျိုးမရှိ၊ အသုံးမ၀င်တဲ့ အတင်းအဖျင်း စကားတွေကို မကြာခန ပြောဆိုမိတတ်ပါတယ်… လာပြောသူရှိပါကလည်း နားထောင်မိတတ်ပါတယ်.. အဲဒီလို သတင်းစကားတွေ၊ အတင်းအဖျင်း မျိုးတွေအတွက် ပညာရှင်ကြီး ဆိုခရေးတီးစ်ရဲ့ ရေစစ်သုံးခုနဲ့ စစ်ထုတ်ပြီးမှ ပြောကြမယ်ဆိုရင် မမှန်တဲ့စကားတွေ ပြောမိတာတို့၊ နားထောင်မိလို့ စိတ်ဆိုးဒေါသ ဖြစ်ရတာတို့ အတော်ကို နည်းသွားမယ် ထင်ပါတယ်.. တစ်ခါတစ်လေမှာ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ယောက်က “နင့်အကြောင်း ဘယ်သူတော့ဖြင့် မကောင်းပြောနေတယ် ဒါပေမဲ့ ဘာပြောတယ်ဆိုတာတော့ ငါမပြောချင်ပါဘူး” လို့များ စပြီး လာပြောလိုက်ရင် ကျွန်မတို့တွေဟာ အဲဒီစကားကို မသိရမချင်း မရ ရအောင် မေးလေ့ရှိပါတယ်… သိသွားပြီးရင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ် မကောင်းပြောတဲ့ စကားအတွက် ကိုယ်တိုင်က စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ရပြီး ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရဘဲ မကောင်းပြောတဲ့ သူကိုသာ စိတ်ခုသွားတာတို့၊ ဆတ်ဆတ်ထိ မခံတတ်သူများဆိုရင် သွားရန်တွေ့ပြီး မခေါ်မပြောနိုင် ဖြစ်ရကာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ ဆုံးရှုံးကြတာတွေ၊ စိတ်ထဲ တနုံ့နုံ့ခံစားရပြီး နာကျင်နေရတာမျိုး၊ မကျေမချမ်း ဖြစ်နေရတာမျိုးတွေထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်တွေကို ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်…